जनताको नाममा - अक्टोबर क्रान्तिको सफलतापछि क. लेनिनको पहिलो जनसम्बोधन
सारा धनीमानीहरु र धनीहरुबाट मद्दत पाइरहेका मानिसहरु नयाँ क्रान्तिप्रति दुश्मनीपूर्ण व्यवहार गर्दछन्, क्रान्तिको विजयमा प्रतिरोध गर्दछन्, बैङ्कहरुको काम रोक्ने धम्की दिन्छन्, विभिन्न संस्थाहरुको काम बिगार्दछन् अथवा रोक्दछन्, हरेक प्रकारले क्रान्तिलाई बाधा पु¥याउँछन्, प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपले क्रान्तिलाई अवरुद्ध गर्दछन् ।
‘लेनिन संकलित रचना खण्ड ३५, पृ. ६५–६७’ मा रहेको रूसी क्रान्तिका महानायक क. लेनिनले अक्टोबर क्रान्तिपश्चात जनताको नाममा गर्नुभएको यो सम्बोधनलाई प्रगति प्रकाशन मस्कोद्वारा प्रकाशित सोभियत सत्ता के हो शीर्षक लेनिनका संकलित रचनाहरुको नेपाली अनुवादबाट लिइएको हो – सम्पादक ।
पेत्रोग्रादमा मजदुर एवं किसानहरुको क्रान्ति अन्तिम रुपले विजयी भएको छ । केरेन्स्कीद्वारा ठगिएका कजाकहरुको नगण्य संख्यामध्ये बचेखुचेको अन्तिमांश समेत तितरबितर पारिएका छन् र गिरफ्तार गरिएका छन् । मस्कोमा पनि क्रान्तिले विजय प्राप्त गरेको छ । पेत्रोग्रादबाट पठाइएका सशस्त्र सेनाहरुसहित केही रेलहरु पुग्नुभन्दा अगावै मस्कोमा युन्केरहरु र अन्य कोर्निलोभको फौजका अफिसरहरुले शान्तिसम्बन्धी प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरिसकेका थिए, जसअनुसार युन्केरहरु निरस्त्र गरिएका थिए र सुरक्षा समिति विघटित गरिएको थियो ।
ट्रेन्चमा रहेका अत्यधिक बहुसंख्यक सिपाहीहरु र उयेज्दहरुमा किसानहरुले नयाँ सरकारको साथै शान्तिको सुझाउबारे तथा किसानहरुलाई तुरुन्तै जग्गा प्रदान गर्नेबारेमा उसले जारी गरेका कानूनहरुको समर्थन जनाइरहेका छन् भन्नेबारेमा मोर्चाबाट र गाउँघरबाट दिनहुँ र हरघडी सूचनाहरु प्राप्त भइरहेका छन् । मजदुर तथा किसानहरुको क्रान्तिको विजय अवश्यंभावी छ, किनभने बहुसंख्यक जनता त्यसको पक्षमा खडा भइसकेका छन् ।
भूमिपतिहरु र पुँजीपतिहरु, पुँजीजीवी वर्गसित घनिष्ट रुपले सम्बन्धित भएका उच्च ओहदामा रहेका कर्मचारीहरु र सरकारी पदाधिकारीहरु, छोटकरीमा भन्ने हो भने सारा धनीमानीहरु र धनीहरुबाट मद्दत पाइरहेका मानिसहरु नयाँ क्रान्तिप्रति दुश्मनीपूर्ण व्यवहार गर्दछन्, क्रान्तिको विजयमा प्रतिरोध गर्दछन्, बैङ्कहरुको काम रोक्ने धम्की दिन्छन्, विभिन्न संस्थाहरुको काम बिगार्दछन् अथवा रोक्दछन्, हरेक प्रकारले क्रान्तिलाई बाधा पुर्‍याउँछन्, प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपले क्रान्तिलाई अवरुद्ध गर्दछन् भन्ने कुरा सहजै बुझ्न सकिन्छ । हामीले यस किसिमका प्रतिरोधहरुको अवश्यंभावी रुपले सामना गर्नुपर्ने छ भन्ने कुरा जुनसुकै सचेत मजदुरले राम्रोसित बुझेको थियो । बोल्शेभिकहरुको सम्पूर्ण पार्टी प्रेसले कैयौं पटक यस कुरातर्फ औंल्याएको थियो । श्रमिक वर्गहरुलाई यस प्रतिरोधले एक छिनको निम्ति पनि तर्साउन सक्दैन । उनीहरु पुँजीजीवी वर्गका समर्थकहरुका धम्कीहरु र हड्तालहरुको समक्ष अलिकति पनि डराउँदैनन् ।
बहुसंख्यक जनता हाम्रो पक्षमा छ । समस्त संसारका बहुसंख्यक श्रमिकहरु र पददलितहरु हाम्रो पक्षमा छन् । न्यायको कार्य नै हाम्रो पक्षमा छ । हाम्रो विजय अवश्यंभावी छ ।
पुँजीपतिहरु र ठूल्ठूला ओहदामा रहेका कर्मचारीहरुको प्रतिरोध दबाइने छ । बैङ्कहरु र सिंडिकेटहरुको राष्ट्रियकरणबारे विशेष राजकीय ऐन कानून बिना कुनै पनि मानिसलाई सम्पत्तिबाट बञ्चित गरिने छैन । यो कानून तयार पारिँदै छ । कुनै पनि श्रमिक र कामदारले एक कोपेक पनि गुमाउने छैन । यसको उल्टो, उसलाई सहायता प्रदान गरिने छ । कडा हिसाब–किताब राख्नु र नियन्त्रण गर्नु, अनि पहिले निर्धारित गरिएका करहरुको हिनामिना रहित असूलउपर गर्नु सिवाय सरकारे कुनै पनि अरु कदम चाल्न खोजेको छैन ।
यी न्यायोचित मागहरुको समर्थनमा मजदुर तथा किसानहरुको सरकारको वरिपरि जनताको अत्यधिक बहुमत एकबद्ध भएको थियो ।
श्रमिक साथीहरु !
अब तपाईंहरु आफैं राज्यको संचालन गर्नु हुन्छ भन्ने कुरा याद राख्नोस् । यदि तपाईंहरु स्वयं एकजुट भएर राज्यको सारा कार्यभार आफ्नो हातमा लिनु हुन्न भने अरु कसैले पनि तपाईंहरुलाई मद्दत गर्ने छैन । अब तपाईंहरुकै सोभियतहरु नै राज्यका शासन–अंगहरु हुन्, सर्वाधिकारसम्पन्न र निर्णायक अंगहरु हुन् ।
आफ्ना सोभियतहरुको वरिपरि एकजुट हुनुहोस् ! सोभियतहरुलाई दरिलो तुल्याउनु होस् ! कसैलाई नपर्खिकन आफूले नै काम गर्न थाल्नुहोस् ! कठोर क्रान्तिकारी सुव्यवस्था कायम गर्नुहोस् ! जँड्याहाहरु, बदमासहरु, प्रतिक्रान्तिकारी युन्केरहरु, कोर्निलोभका समर्थकहरु इत्यादिको तर्फबाट हुने अराजकताको प्रयासलाई निर्ममतापूर्वक दमन गर्नुहोस् !
उत्पादनमा र उत्पादित वस्तुहरुको लेखाजोखामा कडा नियन्त्रण कायम गर्नुहोस् । जनताको कार्यमा क्षति पुर्‍याउन खोज्ने जोसुकैलाई पनि गिरफ्तार गरेर जनताको क्रान्तिकारी न्यायालयमा सुम्पिदिनु होस्, चाहे उत्पादनको अन्तध्र्वंस (विनाश, विघ्न वाधा, हानिनोक्सानी) मा अथवा खाद्यान्न र सामग्रीहरुको जगेडा लुकाउने या अन्नका भारीहरु रोक्ने कार्यमा अथवा रेलमार्ग, हुलाक, टेलिग्राफ, टेलिफोनको काम नै ठप गर्ने कुरामा र सामान्यतया शान्तिको महान कार्य, किसानहरुलाई जग्गा दिलाउने कार्य, वस्तुहरुको उत्पादन तथा वितरणमा मजदूरहरुको नियन्त्रण कायम गर्ने कार्यको विरुद्ध लक्षित जुनुसुकै पनि किसिमको प्रतिरोधमा यस्तो क्षतिको अभिव्यक्ति हुन जाओस् !
मजदुर साथीहरु, सैनिकहरु, किसानहरु र तमाम श्रमजीवीहरु !
सारा सत्ता आफ्ना सोभियतहरुमा कायम राख्नुहोस् ! आँखाको नानीलाई जस्तै गरी जग्गा जमिन, खाद्यान्न, कलकारखाना, यन्त्र–औजार, सरसामान, यातायातको बचाउ र सुरक्षा गर्नुहोस् ! यी सबै कुराहरु अब पूर्ण रुपमा तपाईंहरुकै, आम जनताकै सम्पति हुने छ ! बिस्तारै बहुसंख्यक किसानहरुको सहमति र समर्थन प्राप्त गर्दै, किसानहरु र मजदुरहरुको व्यावहारिक अनुभवका निर्देशनहरु अनुसार हामी दृढतापूर्वक र अनवरत रुपले समाजवादको विजयतर्फ लम्कँदै रहनेछौँ । यस विजयलाई अति उन्नत सभ्य मुलुकहरुका प्रगतिशील मजदुरहरुले दरिलो पार्नेछन् र त्यसले जनतालाई अटल शान्ति प्रदान गर्नेछ, हरेक प्रकारको उत्पीडन तथा हरेक प्रकारको शोषणबाट मुक्त तुल्याउने छ ।
५ नोभेम्बर, १९१७, पेत्रोग्राद ।
अध्यक्ष, जन–कमिसार परिषद्
भ्ला. उल्यानोभ (लेनिन)
(अनुवादः कृष्णप्रकाश श्रेष्ठ)
पछिल्लाे - मेरिएट होटलको भेन्चर नेपालमा, काठमाडौं मेरिएट होटल सञ्चालन
अघिल्लाे - नेकपाका जिल्ला इञ्चार्ज र सहइञ्चार्ज तोकेर एकता प्रकृयालाई नयाँ गति